March « 2012 « K0NT3MP03TRY
စိတ်ကူးဥာဏ်အယူအဆများနှင့် ကဗျာလက်တွေ့ (ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့အထိမ်းအမှတ်)
March 29, 2012 - by admin
မတ် ၂၁ ၊ ၂၀၁၂
(ယခုစာတန်းကို ဖတ်ရှသိမ်းဆည်းရ အဆင်ပြေစေရန် PDF ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်)
In: poetry, prose | 1 comment »
ညအိပ်ယာမဝင်မီ ပထမဆုံးအကြိမ် တစ်လုံးအသောက်အပြီး
မနက်အိပ်ယာနိုးတော့ အံသြကြည်နူးစွာ တွေ့ရှိရပါတယ်
nolvadex online buy-buy cheap nolvadex-online nolvadex buy
နဂိုအရွယ်ထက် ၈ ဆ ထွားလာတဲ့ သူမရဲ့ ရှယ်သားမြတ်တွေ။
အဲသလိုပဲ၊ လိုသော အရွယ်အစားများ၊ လိုသောဘဝများ
လိုသော ယုံကြည်မှုများ တိုးပွားကြပါစေ။
ဆံပင်၊ သွား၊ အသားအရေ၊ လက်မောင်းကြွက်သား၊ တင်သားတင်းတင်း
အောင်မြင်သော သူများ၏ ပကတိစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း တစ်ပါတ်အတွင်း
မရရှိလျှင် အာမခံချက် ပြန်အမ်းမည်။ ရာဇဝင်အာမခံ။
မိမိတို့ရဲ့ မပြောင်းလဲတဲ့ စေတနာအရင်းခံ။
လိုသောရာထူး၊ လိုသောဝင်ငွေ၊ လိုသော အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ကား၊ ဖုံး။
လူကြီးမင်း၊ အမျိုးကောင်းသမီး များနှင့် မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျား
နှလုံး၊ အသည်း၊ အဆုတ်၊ သွေး၊ အရည်ကြည်၊ ကျောက်ကပ်
အင်္ဂါရပ်များအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တစ်သမတ်လည်ပတ်ရန်
မိမိတို့တာဝန်အဖြစ် သမိုင်းရေးအရ လုံးဝလိုလားစွာ ခံယူပါသည်။
မိမိတို့ကို ခေါ်ပါ။ မိမိတို့ကို ခိုင်းပါ။
မိမိတို့ကို ချိန်းပါ။ မိမိတို့ကို ချစ်ပါ။
မိမိတို့ကို လုံးဝဥဿုံ ယုံကြည်စိတ်ချထားလိုက်ပါ။
သင့်ဘဝမှာ ဘာလိုနေတာ သင့်ထက် မိမိတို့သိကြတာ
ကမ္ဘာမှာ စမ်းသပ်ခံနိုင်တဲ့ မိမိတို့ရဲ့ နည်းစနစ်တွေ အမှန်အကန်ပါ။
တိုက်စစ်ပါ။ အားလုံး အစစ်အမှန်။ အတွင်းရန် အပြင်ရန်မရှိ။
ဝေဖန်စရာမရှိ၊ ကြောင့်ကြစရာမရှိ၊ သံသယလုံးဝ ဖြစ်စရာမရှိ။
အခုချက်ခြင်း သင့်ကိုယ်သင် မိမိတို့ထံ အပ်နှံပါ။
အခုချက်ခြင်းပဲ သင့်ကို မိမိတို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပါရစေ။
သင့်ဘဝတိုးတက်စေဖို့ မိမိတို့လက်ထဲ အခုပဲလာရောက်အပ်ပါလေ။
ပြီး… … တစ်ယောက်စီအတွက် ဧကံမုချရရှိကြမယ့်
ပေါက်စေအမိန့်နဲ့ လုံးဝပေါက်မယ့် ကံစမ်းမဲပြားတွေ။ ။
18 March ’12
In: poetry, reading | No comments »
March 8, 2012 - by admin
ထုံးဖြူသုတ်လိုက်တယ်။ ကြောက်ချေးနံ့ဟာ စည်ပင်ဝန်းကျင်ရဲ့ဗဟိုပဲ။
သဒ္ဒါလင်္ကာရ ၊ အတ္ထာလင်္ကာရ ၊ ပါဏာတိပါတာ ၊ တိုကျိုဖရိုက်ဒ်ချစ်ကင်းန် ၊
နီလာဒံပေါက်။ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ ခံစားမှုဟာ ကြက်ဖကိုလည်လှီးလိုက်တာ
ဖုံလုံးကြီးတွေထဲ ၊ ဟုတ်လား။ တစ်ခဲနက်ထောက်ခံကြ ၊ ဟုတ်လား။
သွားရမယ့်လမ်းမဟုတ်ဘူး ၊ သွားရင်းဆောက်သွားရတဲ့
ပြိုပျက်အဆောက်အအုံတွေ ၊ ခြစားနေထိုင်မှုတွေကြား ၊ လမ်း။
ယာယီစခန်းတွေတော့ရှိတာပေါ့ ၊ အလွယ်တကူမြိုချလို့ရတဲ့စာသားတွေ ၊
ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုတဲ့ အဖွဲ့အစပ်တွေ ၊ နံရံကအုဋ်သားတွေ။
`နားမလည်အောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ၊ နားကိုမလည်တာ´။
ပိုင်းဆစိပ်မွှာချင်တာမဟုတ်ဘူး ၊ ပေါင်းစပ်ဆက်မှီးချင်တာ။
ဆိုက္ကားနောက်ခုံပေါ်ခြေနှစ်ဘက်ချိတ် ၊ ကြိုးတစ်စည်းမှာပဲ
ဘ၀တစ်ပါးဆီစီးနင်းလိုက်ပါသွားကြတာ ၁၀ – ၁၂ ကောင်။
ချိုင့်နင်းလိုက်ရင် ကလုကလုကလူးကလော်ကလော်ကလော် ၊
တောင်ပံနှစ်ဘက်အားရပါးရရိုက်ခတ်လို့ ၊ ဘာဂျာတံခါးဆွဲဖွင့်လို့
နေဟာထွက်သွားတယ်။ နေဟာဝင်လာတယ်။ နေဟာအိပ်သွားတယ်။
ရုပ်သံမှာ အဲဒါတွေလည်းမပါဘူးနော်။ ရုပ်သံဟာ သုတဖျော်ဖြေပဲ။
ကျွန်တော်မှားသွားတယ်။ ပထမလိုင်းမှာ `ကြောက်´ မဟုတ်ဘူး ၊
`ကြက်´။ ဟောသလိုပေါ့။ ကျွန်တော်အမောက်ထောင်လိုက်တယ် ၊
ခြေဖျားထောက်ရင်ကော့လိုက်တယ်။ အောက် . . . အီး . . . အီး . . .
`အွတ်´။ တစ်ချက်ပဲ။ တစ်ချက်တည်းပဲ။ လမ်းဖွင့်ပွဲမှာ
ဒုက္ခသည်အပြုံးတွေနဲ့ ၊ အနာကြီးရောဂေါသည်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့
တန်းစီရပ်လို့ ။ ကျွန်တော့်လက်ထဲက စက္ကူအလံလေး
ကြွေးကျော်။ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးရင် အလံရဲ့ ၀ါးချမ်းလေး
လက်တစ်ဘက်လုံးမဲ့နေတာ အင်္ကျီလက် ပတ်လတ်မှာမြင်ရ။
မိုးလင်းတော့မယ်။ တွန်သံဟာ တစ်ချက်တည်းပမ်းထွက်သွားတယ်။
မဟုတ်ဘူး။ ဟောဒီမှာ ၊ ဘ၀ဖြစ်တည်မှုရဲ့ စစ်မှန်သောအသံ
အောက် . . . အီး . . . အီး . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ။ ။
13 – Feb – 12
In: poetry |3comments »
ကဗျာဟာ လိုရာ အဓိပ္ပါယ်
ဖိုးပါထည့်ရောင်းတော့ မကြော်ငြာတဲ့ ပစ္စည်းဟာရောင်းပန်းလှသလား။
လိုရင်းပဲပြောပါဗျာ ၊ ကဗျာမဖတ်ရလည်းနေပါ့စေ။
ကြည့်စမ်း ၊ ကဗျာကိုဘေးချထားပြီးစိတ်ကူးလီဆယ်နေလိုက်တာ။
ကားကြီးဟာ အကယ်ဒမီအတွက် ၊ ဗီဒီယိုဟာဝမ်းရေးအတွက်ဆိုသလိုပေါ့။
ဒီနှစ်အော်စကာ အသံတိတ်ကားရသွားတယ်။ The Artist ။
ဆူညံလွန်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အသံတိတ်ခြင်းရဲ့ အသံတန်ဘိုး။
ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အရေးအဖွဲ့ ၊ ဘုံပျံနဲ့ သွေးပဲ့ (ဘေးချဲ့) (ဆေးထည့်)။
ယဉ်ကျေးမှုခုခံစစ်မှာ ကာရန်နဲ့မလုံလောက် ၊ ပေါက်ကွဲအားပြင်း
နိမိတ်ပုံတွေလိုင်းပြောင်းဝထဲထိုးသွင်း ၊ အနက်ချင်းအနီးကပ်လှံစွပ်၊ မှ
ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံထဲက ပစ်မှတ်အဆောက်အဦ/အအုံ။ ကွက်တိ။
စစ်အကြောင်းမတွေးချင်ပေမယ့် သွေးနီဥဟာ စစ်နဲ့ပဲကြီးပြင်းခဲ့ရ။
အခုသွေးဖြူတွေဟာ နေ့ချင်းညချင်း ဟီမိုဂလိုဘင်ပဲ။
တန်းမသိရင် မဖတ်ချင်တော့တာနဲ့ ပျင်းတာနဲ့
လိုတာဆွဲတွေးလို့မရရင် မလိုတမာဆဲရေးဖို့ ရယ်ဒီမိတ်နဲ့။
ပန်းဆက်လမ်းဟာ ပါဝါနဲ့ ခေါင်းဖြတ်ခံလိုက်ရရှာတယ်။
ကဗျာကို ခံစားမှုနဲ့ရေးတာမဟုတ် ၊ (စိတ်ကူး) ဥာဏ်နဲ့ရေးတာ
`ကဗျာ့သဘော´ကိုမေ့ထားကြ။ စဉ်းစားခြင်းကို ပ ထုတ်။
ပဲပြုတ်ရဲ့ခံစားမှုပဲ လိုချင်တယ် (စစ်စစ်)
ကဗျာနလပိန်းတုန်း ကရေစီတော့မဖြစ်တန်ရာ။ ။
ဟီမိုဂလိုဘင် = သွေးနီဥတွင် အောက်ဆီဂျင်သယ်ဆောင်သည့်အရာ။
2 – March – 12
In: poetry |2comments »
March 6, 2012 - by admin
`လှိုင်းသစ်´မဂ္ဂဇင်းပါအဆိုပါဆောင်းပါးကို မဖတ်ရသေးလျှင်အထက်ပါ`မန္တလေး´ကိစ္စပါရှိသော စာပိုဒ်ကို ကျွန်တော်ပြန် လည်ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ စာမျက်နှာ ၁၀၄ ၊ ကော်လံ ၂ ၊ စာပိုဒ် ၂ ၊ လိုင်း ၄ တွင်ဖြစ်ပါသည်။
`ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ခေတ်ပေါ်ကဗျာကို ဆန့်ကျင်တာလဲ။ အဲသလိုမေးခွန်းမျိုး
ကျွန်တော်မေးခံရဖူးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မန္တလေးသားတွေဆီကပေါ့´။
ဆက်စပ်၍အဆိုပါဆောင်းပါးအကြောင်းအနည်းငယ်မျှပြောပါရစေ။ ထိုဆောင်းပါးကို ဆောင်းပါးအောက်ခြေ၌နေ့စွဲတပ်ထား သည့်အတိုင်း သင်္ကြန်ရက်နေ့များ ၊ ၂၀၀၇ တွင်ရေးသားပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလ၌ LANGUAGE POETRY/LP/ ဘာသာစကားကဗျာ နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော့်အား ရှေ့တွင်လည်းကောင်း ၊ ကွယ်ရာတွင်လည်းကောင်း ၊ စာအားဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ဖုန်းအားဖြင့်လည်း ကောင်း စာပေမဆန် ၊ အယူအဆ/ သဘောတရားမဆန်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးတိုက်ခိုက်မှုများ ၊ ညစ်ညမ်းစွာဆဲရေးတိုင်းထွာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ ကြသည်သာမက ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခံရခြင်းပင်ရှိခဲ့ပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်များ ကျွန်တော်ထုတ်ဖေါ်ပြောခြင်းမပြုလိုပါ၍ မပြောတော့ပါ။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်သူများတွင် အဓိကအားဖြင့် မန္တလေးနှင့်ပျဉ်းမနားမှ (တစ်ချိန်က) ကဗျာမိတ်ဆွေ/ရေးဘော်များဖြစ်ကြပါ သည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါဆောင်းပါးတွင် `မန္တလေးသားတွေ´ ဟုပါရှိသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရပါသည်။ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် ကိစ္စကိုအဆို ပါဆောင်းပါးတွင် ဤကဲ့သို့ ရေးသားပါရှိခဲ့ခြင်းကို ကျွန်တော့်အမှားဟု ခံယူပြီး ယခုလိုတောင်းပန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
In: prose | 1 comment »
March 3, 2012 - by admin
ဒီဘက်မှာပဲ ငါ့ခန္ဓာနဲ့ ငါဟာကျန်ခဲ့တယ်။
ငါ့ခြေရင်းက မြေကြီးထဲ ငါ့လက်နှစ်ဘက်ထိုးသွင်း
တစ်လှမ်း ၊ နှစ်လှမ်း ၊ သုံးလှမ်း . . . . အဲဒါနယ်စပ်ပဲ။
ဘာစည်းမှတားမထားဘူး ၊ ဘာစည်းရိုးမှမခြားဘူး။
ဒီကနဲ့ တစ်ဆက်တည်းပေမယ့် ဒီကရဲ့ အဲဒီဟာနယ်စပ်ပဲ။
ငါငေးကြည့်နေမိတယ် ၊ ငါစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လွတ်လပ်သွားပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ စူးမြက်။
အလင်းသီတဲ့ကြိုး / အပူဒဏ်နဲ့ / ပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်။
အသိနဲ့ပဲ လရောင်အရွေ့ကို မြေ့မြေ့ထိနေတယ်။
ကူးနေတဲ့ ငါးဟာ ရေပေါ်ယုံကြည်မှုထားသလိုပဲလို့ထင်တယ်။
ငါမသွားနိုင်လို့ နယ်စပ်ဟာ ငါ့ဆီရောက်လာတယ်
ရုရှက မရီနာ ဆဗက်တာယဲဗားပြောခဲ့တယ်
ဗြိတိသျှက ရု(သ်)ဖေးန်ရိုက်တ် ထပ်ပြောတယ်
မဟာပုရိသ အလုံးစုံစိုးမိုးမှုမှာ ငါဟာမိန်းမ
ဒီအသိတွေဟာ ငါ့ကို ဒီနေရာမှာပဲအမြစ်တွယ်စေတယ်။
နယ်စပ်ဟာ ငါ့ထဲဝင်သွားပြီး ငါ့ရဲ့ ထာဝစဉ်
ဘယ်လိုအမည်တပ်တပ် ၊ အခုဒီမှာ ငါဒါကိုပဲထပ်ပြောမယ်
လ ကတော့ တစ်စင်းတည်းပါ။
ငါဟာလည်း လ ရောင်ငတ်တတ်သူတစ်ဦးပါ။
ငါ့ခန္ဓာအဖွဲ့အစည်းဟာ လ ရောင်ပွေ့ဖက်ဒဏ်တွေပါ ။ ။
26 – Feb – 12
In: poetry | No comments »
Recent Posts	နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဘယ်နှကြိမ်
ဘရင်ဒါ ဟစ်လ်မင်းန်ရဲ့ စပ်ကြောင်းကဗျာဗေဒ
ပသို့ဆိုစေ ၊ ပန်းတွေလည်း
Zeyar Lynn FB Recent Commentsငြိမ်းစိုးဦး on ပသို့ဆိုစေ ၊ ပန်းတွေလည်းငြိမ်းစိုးဦး on ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာရဲ့ တက်ခ်စ်တ်ချာငြိမ်းစိုးဦး on နံနက်ခင်းတေးသံငြိမ်းစိုးဦး on ခရစ္စတိုဖါ `ငန်းနက်´ ကိုလံဘတ်စ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်မှငြိမ်းစိုးဦး on sex toyArchives	April 2013
© 2013 K0NT3MP03TRY . All Rights Reserved.
Powered by priligy online
Order generic viagra with no rx. Order generic isotretinoin no prescription. Buy accutane 20mg online without prescription. Cheap cialis online without prescription. Order cheap generic female viagra 100mg online without prescription.valtrex online